Ezemidlalo | Scrolla Izindaba
Scrolla Africa - 16th May 2022 0
I-Man United enkingeni yokungadlali kahle
Ukuqokwa kuka-Erik Ten Hag njengomqeqeshi we-Manchester United akuzange kulikhuthaze iqembu.
Kuboshwe owamaBhokobhoko esikhumulweni sezindiza
U-Elton Jantjies ongumdlali webhola lombhoxo odle umhlanganiso kwiNdebe yoMhlaba uboshwe esikhumulweni sezindiza i-OR Tambo ngeSonto ekuseni.
Imibuzo ngejezi le-Newcastle United
Ijezi lebhola likhombisa okuningi ngeqembu. Odabeni leqembu i-Newcastle United ukuputshuka kwesithombe sejezi labo lesizini ezayo sekudale impikiswano ngokuthathwa kwayo i-Saudi Public Investment Fund (i-PIF).
I-Liverpool nethuba lokunqoba isicoco seligi
USteven Gerrard unethuba elimangalisayo lokuwinisa i-Liverpool isicoco se-Premier League ngosuku lokugcina ngemuva kokuhluleka ukunqoba isicoco ngesikhathi esengumdlali.
Uzohleka yedwa ozonqoba iPrince Buthelezi Marathon
Scrolla Africa - 13th May 2022 0
Kuwumjaho wasemakhaya kodwa kulindeleke ukuthi uhehe amakhulu abasubathi ngenxa yokuthi imali yemiklomelo isondele kweye-Comrades Marathon.
UTyson ungqimuze umgibeli ebhanoyini
Owayengumpetha we-heavyweight uMike Tyson uqoshwe eshaya umgibeli endizeni e-San Francisco International Airport kodwa abashushisi bamemezele kuleli sonto ukuthi ngeke abhekane necala lokushaya kulandela lesi sigameko.
I-Richards Bay FC ethubeni lomlando kwi-GladAfrica
I-Richards Bay FC sekusele kancane ukuthi iqophe umlando ebholeni laseNingizimu Afrika. Ingase ibe yiqembu lesibili eliphuma esifundeni esisenyakatho yeKwaZulu-Natal ukuzitholela isicoco seligi yakuleli.
I-Pirates ithi izozibamba ziqine kowe-CAF
Nakuba engene ngonyawo olulodwa kowamanqamu we-CAF Confederation Cup, umqeqeshi we-Orlando Pirates, uMandla Ncikazi, uxwayise abadlali bakhe ngokuthi bangazitheli ngabandayo uma sebebhekene ne-Al Ahli Tripoli emlenzeni wesibili.